KTO-USA: August 2011
Posted by Admin Wednesday, August 31, 20110comments
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရွှေထွက်ရှိသည့် နေရာ ၂၇၇ နေရာရှိပြီး အများစုမှာ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရှိနေ
by Kachin Development Networking Group (KDNG) on Wednesday, August 24, 2011 at 11:14pm
Sunday, 21 August 2011 19:39
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွှေကို တိုင်း နှင့်ပြည်နယ် အများစုတွင် တူးဖော် တွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း ၁၉၇၆ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့် စာရင်းများအရ ၂၇၇ နေရာ ရှိကြောင်း၊ ရွှေထွက်ရှိသည့် နေရာများ အနက်အများစုမှာ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွှေက နေရာ အနှံ့အပြားမှာ ထွက်တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ အနည်းနဲ့အများပဲ ကွာတာပါ။ စာရင်းအရတော့ ၁၉၇၆ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ရွှေထွက်ရှိတဲ့ နေရာ ၂၇၇ ခုရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အများစုက ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတာပါ။ စာရင်းမှာ မပါသေးတဲ့နေရာတွေလည်း အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ရွှေထွက်တဲ့နေရာတွေမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ၀င်ရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ နေပါတယ်။ ပြည်ပလုပ်ငန်း အချို့လည်း ရှိတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ မိမိ အကျိုးတစ်ခုတည်း မကြည့်ဘဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုကိုလည်း ထည့်တွက်သင့်ပါတယ်”ဟု ဘူမိဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ရွှေရှာတဲ့အခါ စနစ်ကျနမှု၊ နည်းပညာ လိုအပ်ချက်တွေကြောင့် သစ်ပင်တွေဆုံးရှုံးရတယ်။ မြစ်ချောင်းကောတာတွေ ဖြစ်ရတယ်။ ထွက်ရှိတဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို သေချာ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်မှု မရှိတဲ့အတွက် မြစ်၊ ချောင်းတွေ တိမ်ကောရတယ်။ ရေနေ သတ္တ၀ါတွေ ထိခိုက်မှုရှိတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကမြစ်ကြီးတွေ နားမှာရှိတဲ့ ရွှေလုပ်ကွက်တွေ အနေနဲ့ ပိုမိုသတိထားရမှာပါ”ဟုသဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
၁၉၇၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ခုနှစ်အတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့် စာရင်းအရ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ၁၀၃ နေရာ၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် သုံးနေရာ၊ တိုင်း ဒေသကြီးများဖြစ်သော စစ်ကိုင်း တိုင်းတွင် ၅၄ နေရာ၊ တနင်္သာရီတွင် ခုနစ်နေရာ၊ ပဲခူးတွင် ရှစ်နေရာ၊ မန္တလေးတွင် ၂၈ နေရာ၊ မွန်ပြည်နယ် တွင်လေးနေရာ၊ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတွင် လေးနေရာ၊ မြောက်ပိုင်းတွင် ၃၂ နေရာ၊ အရှေ့ပိုင်းတွင် ၂၂ နေရာ နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် တစ်နေရာ ရှိကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်တွင်လုပ်ကိုင်နေသော အကြီးစားရွှေတူးဖော်ခြင်းများ
Posted by Admin Sunday, August 28, 20110comments
By:facebook : Hpung Aung Maran
- ကချင်ပြည်နယ် အထူးဒေသ (၂) KIO (လိုင်စင်)
နယ်ခြားစောင့်တပ်(BGF) အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရေး လက်မခံနိုင်ကြတဲ့ကိစ္စမှာလည်း တစ်စုံတစ်ရာ တူညီမှုတွေရှိနေတယ်။
တရုတ်နယ်စပ်ကို ကျောပေးထားကြတာခြင်းလည်း တူတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ (KIO) ကို ကွက်ပြီး စစ်ရေးဖိအားတွေ တိုးပေးလာရတာလဲ။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး (ငြိမ်းချမ်းရေး) လုံးလုံးလျားလျား ပျက်သုန်းသွားပြီဆိုတာကို ဖော်ပြချင်တာလား။
“အမာကို ရှောင် အမွကို တိုက်” ဆိုတဲ့စစ်ပရိယာယ်လား။
တရုတ်အစိုးရနဲ့ (MoU) ထိုးထားတဲ့ “ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ကျောက်ဖြူ- ယူနန် ရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်း၊ မူဆယ်- ကျောက်ဖြူ ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် စီမံကိန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးနဲ့ ကချင် ပြည်နယ်အတွင်းက အထွေထွေကုန်ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်း” တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရှင်းလင်းရေးလုပ်သလား။
သမ္မတဦးရှစ်လုံးပြောတဲ့ “ငြိမ်းချမ်းရေးမယူသေးသည့်အဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့” နဲ့ ပူးပေါင်းသွားတဲ့ ၃ ဖွဲ့ထဲမှာ (KIO) ပါနေတာကြောင့်လား။ ဒီလိုဆိုရင် (KIO) နဲ့ “ငြိမ်းချမ်းရေး” ယူထားတာ ပျက်သွားပြီဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
တင်းမာမှုက သေနတ်သံထွက်ရုံတင်မကဘူး၊ နှစ်ဖက်သေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အဆင့်ထိ ဒီဂရီတိုးလာနေတယ်။
“နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာ ကီလိုမီတာ ၂၀၀၀ ကျော် ရှည်လျားပြီး နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးမှာ များစွာအရေးကြီးပါကြောင်း” ဆိုပြီး တရုတ်သမ္မတဟူက သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ပြောလိုက်တာ ရက်ပိုင်းမျှ (၁၆ ရက်ခန့်) သာ ရှိပါသေးတယ်။
အပစ်ရပ်တဲ့ကိစ္စမှာ (KIO) ဟာ အခြားအဖွဲ့များနဲ့ မတူတဲ့ခြားနားမှုတွေ ရှိပါတယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ (နဝတ) စစ်အစိုးရနဲ့ အကြာဆုံးဆွေးနွေးတဲ့အဖွဲ့ဟာ (KIO) ဖြစ်ပါတယ်။ ၄ နှစ်နီးပါးလောက်ကြာပါတယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် (KIO) နဲ့ (နဝတ) စစ်အစိုးရ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အငြိမ်းစားသံအမတ်ကြီး ဦးလဝမ်၊ သိက္ခာတော်ရဆရာတော် ဦးဇဘွဲကျွံနဲ့ ဦးခွန်မြတ်တို့က ဆက်သွယ်ပေးမှုနဲ့ ကြူကုတ် (ပန်ဆိုင်း) မှာ စတင်ဆွေးနွေးတာပါ။ အဲဒီကာလမှာ (KIO) နဲ့ အပစ်အခတ်မရပ်စဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ (KIO) ရဲ့ တပ်မဟာ (၄) နဲ့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ (၁၃) ရက်နေ့မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ခဲ့ပါတယ်။ တပ်မဟာ (၄) ရဲ့ဒုတိယတပ်မဟာမှူး ဦးမထုနော်နဲ့ (ရမခ) တိုင်းမှူးတို့ လားရှိုးမြို့မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး သဘောတူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မဟာ (၄) က “ကောင်ခါး” ကို ဌာနချုပ်လုပ်ထားပါတယ်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့၊ လားရှိုးမြို့မှာ (ရမခ) တိုင်းမှူး၊ ဒုတိယတပ်မတော်ထောက်လှမ်ရေး ညွန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းတို့နဲ့ (KIO) က ဒေါက်တာလဂျာ ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေ ဆွေးနွေးကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၄ ရက် နေ့မှ “ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်” လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲကို ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မိုင်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့ တက်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုက (KIO) ကိုယ်စားလှယ်က “အမျိုးသားညီလာခံ” မှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်တက်ရောက် ဆွေးနွေးတာပါ။ ဒါ့အပြင် မြစ်ကြီးနားမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ကြံ့ဖွံ့အသင်းက လုပ်တဲ့ “လူထုအစည်းအဝေးပွဲ” ရဲ့ သဘာပတိစင်မြင့်ပေါ်မှာ အဲဒီ ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကို ဦးစခုန်တိန့်ယိန်းနဲ့အတူ တွေ့ရပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) ရဲ့အခြေခံမူများနဲ့ သေးစိတ်အခြေခံရမယ့်မူတွေပါတဲ့ မော်ကွန်းမှတ်တမ်းဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုလည်း အဲဒီကိုယ်စားလှယ်ကြီးကပဲ ထိုစဉ်က ညီလာခံကျင်းပရေး ကောင်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် (ယခု သမ္မတ) ထံ အပ်နှံနေတဲ့ပုံကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
နောက်တော့ အဲဒီကိုယ်စားလှယ်ကြီးဟာ (KIO) ထွက်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။
သိန်းစိုးကော်မရှင်က “တည်ထောင်ခွင့်” ပင်မပြုခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တသီးပုဂ္ဂလအဖြစ် ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံဖို့ ထပ်မံကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း သိန်းစိုးကော်မရှင်က ခွင့်မပြုပါဘူး။
နောက်ဆုံးမှာတော့ မြစ်ကြီးနားမှာရှိတဲ့ ကြံ့ဖွံပါတီထဲမြို့မိမြို့ဖအဖြစ် ဝင်ရောက်ဖို့လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
ကြည့်ရတာ “ကြံ့ဖွံ့ပါတီ” က ဘာမှတုန့်ပြန်ပုံ မပေါ်ပါဘူး။
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ (၄) ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတဲ့ “ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေးကော်မတီ (CEFU)” မှာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် (KIO) ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်အင်ဘန်လပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေးကော်မတီ (CEFU) ဟာ ၂၀၁၁ ဖေဖေါ်ဝါရီလထဲမှာ “ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC)” အဖြစ် ယခုအခါ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
(UNFC) ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) အခန်း (၂) ၊ ပုဒ်မ (၆) -
(ဂ) စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုက UNFC အဖွဲ့ဝင်အား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ နိုင်ငံရေးအရ ဖိတ်ခေါ် ကမ်းလှမ်းလာလျှင် တဖွဲ့ချင်းအနေဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပြုရန်နှင့် UNFC အနေဖြင့်သာ စုစည်းဆွေးနွေးရန်။
အခန်း (၄) ပုဒ်မ (၁၄) -
(ဆ) ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တဖွဲ့ကို စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုက ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခြင်းများ ပြုလုပ်လာလျှင် ကျန်ဖက်ဒရယ် ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များက ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ညွှန်ကြားချက်များအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားကြရမည်။
စသဖြင့်ဖေါ်ပြပါရှိပါတယ်။ (UNFC) တွင် အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)၊ (KIO) တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတင်ပြလိုတဲ့အချက်ကတော့ ဒီလိုစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေ ဖြစ်လာနေတာကို ပြည်တွင်းပြည်မမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက ဘယ်လိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ပြဿနာကိုယ်ရှင်းဆိုပြီး သီးခြား ကင်းလွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ/ရွေးချယ်ခံပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနေနဲ့လည်း ဒီကိစ္စတွေကို အလေးထားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်။
“နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပြည်သူ့စစ်နှင့် နယ်ခြားတပ်များညွန်ကြားရေးမှူးရုံး” ကသာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာအဖြစ် သတ်မှတ်ပိုင်းခြားထားလို့ (လုံးဝ) မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါဟာ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာ။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) ဘောင်ထဲက ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ ပြဿနာအဖြစ် ဖေါ်ပြနေတာလည်းဖြစ်တယ်။
Posted by Admin Saturday, August 27, 20110comments
Latest gathering of KIO/KIA personal was held at Alen bum, Hpungmai Hall on Aug 27 at 10 am. In this meeting, KIA’s Chief of Staff General G. Gam Shawng explained reasons behind current fighting to KIO/A personal. He said KIO had attempted several times to achieveaceasefire agreement with Burmese government and beginameaningful political dialogue. But Burmese government continued its plan to eliminate KIA. Kachin public suffered from human rights violations such as abuse and torture of villagers, shootings and killings of innocent civilians, destruction of property, and rape. KIO had worked patiently to achieveagenuine negotiated political settlement.
General G. Gam Shawng said current war began in June9because of Burmese army’s intrusion to KIA’s 15th battalion, under 5th Brigade controlled area. Kachin public has suggested and urged KIO to consider failure of 17 year-long ceasefire that has worsened human rights conditions in Kachin State. He assured that KIO has been taking painstaking efforts to avoid mistakes and not to move towardsawrong direction. KIO has proposed Burmese government to beginanational wide ceasefire and political dialogue through UNFC. He asked to pray for strength and wisdom in almighty God and put trust in KIO central committee.
(Dr. Zar Ni ka ai "What really is the NLD now?" ngu ai hpe SK kaw nna Jinghpaw hku bai ka gale tawn ai re.)
"Gumsan wa Thein Sein gaw tengsha mungmasa lam shai wa na hpe ra sharawng ai" nga nna ASSK nan nan tsun dat sai lam Bangkok Post shi laika hta lawm ai. Dai rai yang President Thein Seinahpyen n-gun hte jum-tek tawn ai mungmasa hkrang gaw hpa rai ta? ngu shawng san yu ra ai. President San Yuaprat hpe dum ai n rai ni?
Revolutionary (Rawt Malan) Council, 1962-74 prat; Ne WinaMSL (1974-88) prat ni gaw shawa ra-lata masa hku sharawt tawn nna Myanmar Munghpawm Atsuya byin ai n re. Dai ni na Thein SeinaMyanmar Munghpawmamarung nra gaw Than ShweaTatmadaw re. Matsing: ASSK n-gup hpaw ai majaw hpa baw hpe mahtang shai wa sata?
Ya Thein Sein gaw (Than Shweahpyen marung n ra) hta myiman ningnan shakap tawn ya dat sai; Thein Sein hpe mung, hpyen dapeMSL hte Ne Win hpe run agrawp mat wa shangun ai zawn, kata nna kapaw kau dat wa na kun? Than Shweashinggyim aprat gaw lani mi hpang lani mi lai mat wa nga ai. Matsing: Ndai hpe n mai malap na re; dingla wa aprat htum mat wa yang Thein Seinantsa lam hpyi hpun tawn ai mungmasa hkrang gaw agrawp hkrat mat wa nna hpyen hpungamyiman sha bai kra pru wa mai ai.
Tatmadaw kataemyiman lata nna tsang tsaw de lung wa shangun ai manghkang hpe kaning ngu sawn la na kun? Myen n rai ai malawm amyu niabuga hpe colony shatai kau ai manghkang hpe gara hku sawn yu ra na kun?
Shingganemawng ai shiga hta, sumtsan salang dingsa U Myint, U Thantakashu Thant Myint U, hte hpyen atsuya gumhpraw sha nna shiga dap jum ya ai Nay Win Maung, hte kaga ni gaw Thein Sein hpe shadaw ai, nga nga ai. Ndai hpe gara hku chye na la na kun? Hpyen hpung hpe shadaw sai ngu na kun? Thein Sein jahpun tawn ai hpyi hpe shadaw sai ngu na kun? Matsing: Thein Sein hpun tawn ai mungmasa hpyi gaw kataehkrang uhpung n nga ai; kata na hpyen hpung hpe shi uphkag lu ai wa n re.
NLD, democracy ra sharawng ai nianingshawng hpa-awn uhpung, hpe dai ni gara hku yu yu ra na kun? Hpyen hpung kun? Thein Sein hpyi palawng kun? NLD gaw dai ni gumshem masaaopposition n rai mat wa sai, Thein Seinahpyi palawng hpe hkap la kau dat ai majaw ndai hku byin mat wa sai n rai kun?
NLD hpe mung shawaamyit hta tara shang ai mungmasa hpung ngu nna matut hkap la lu na kun?
Hpyen hpungeMunghpawm hpe matut up na hpe dai daram n tsang nngai; mungdananga mu nga mai sut lam hpe uphkang ra ai hku woi uphkang na atsam n rawng ai hpe ngai grau myit tsang ai. Bawnu mung n nga ai, jaw ai masa hkan na myit mung n rawng ai, ndai gaw manghkang kaba htum re.
Dip gamyet uphkang ai masa hte rawt malan ai masa gaw galoi mung gapyawn nna byin ai baw re. Shaning tsa-ning jan mat wa tim ethnic nationality niarawt malan gaw prai poi mat na n re. Balkan zunlawng, Thailand dingda jut, Northern Ireland ni hpe sakse hku yu yu ga. "Bama" mungmasha ni mungdan uphkang masa hpe rawt malan dinghkat ai gaw 1958 nna dai ni du hkra dingyang rai nga ai.
Rawt malan ai lam dai ni awng dang lu ai lam, garai n byin ai lam, gaw madung n re; matsing ra ai lam gaw rawt malan ai hku mungmasa galaw ai gam maka gaw grin nga ra na re, dai re majaw mungdan kataengwi pyaw simsa lu ai ai lam n mai byin na re, ndai majaw mungdan shawa hkum shagu matut hkam sha ra na sha re.
Myen mungalabau hpe chye na ai niamatu ndai gam maka gaw laklai ai baw n rai mat wa ang sai.
Matsing: Thein Sein gaw hpyen n-gun, gumshem masa hpe control n lu ai; hpyi hpun gumsan magam sha re. Thein Seinamatu manghkang jat nna shabyin ya lu yang hpyi-palawng hte kata na gumshem n-gun daw lahkawngalapranezang ayai wa na byin mai ai. Tinangabuga hpe gahkyin gumdin la mat wa ai masing masa hte Thein Sein hpe manghkang shabyin ya na lam anhteashawng lam rai ang sai, ngu asan sha mu lu na saga ai. SK
Posted by Admin Thursday, August 25, 20110comments
Aid workers sayaproper assessment is needed
BANGKOK, 19 August 2011 (IRIN) - Aid workers in Myanmar's northern Kachin State have expressed concern over prospects for food security after recent fighting between government forces and the rebel Kachin Independence Army (KIA).
"Even if the fighting stops, we will faceafood crisis for one or two years," Mai Ja,aspokeswoman for the Kachin Women's Association Thailand (KWAT), told IRIN.
Since fighting resumed two months ago afterabreakdown ina17-year ceasefire in June - much of it due toaproposed government plan to incorporate Myanmar's numerous armed ethnic groups intoasingle border guard force - thousands of people have fled to urban areas such as Myitkyina, the capital of Kachin State, and Waimaw, as well as other areas under the control of the Kachin Independence Organization (KIO), the political wing of the KIA.
In addition, some people have crossed the border into China.
Up to 25,000 people are now believed to have been displaced, including 15,000 along the 2,185km Burmese-Chinese border, now living in makeshift camps set up by local aid groups.
Another 10,000 people are believed to be in Myitkyina, Waimaw, Moe Mauk and Bamaw townships.
Thousands of farmers abandoned their crops and livestock atacritical time of year, say aid groups. Farmers in Kachin's highlands traditionally grow their paddy,astaple part of the Burmese diet, in June, while farmers in the lower areas grow theirs in July and August.
And whileasmall number of farmers have remained behind to work their fields, the vast majority have not.
In Ban Sau Yang,avillage on the road between Myitkyina and Bamaw, just seven of 170 families have stayed behind, only to struggle to hire additional labour to assist them.
"If they cannot harvest their farms and paddy fields this season, how will they cover their family's food needs next year?" Mai Ja asked.
Aid groups now worry that lack of local paddy production will haveaserious impact on all of Kachin State, as people from areas such as Myitkyina, Waimaw and Laiza rely on the rice produced in the conflict-affected areas.
"People from the villages which are close to Myanmar forces will suffer seriously," said La Rip, coordinator of Laiza-based Kachin Relief Action Network for IDP [internally displaced person] and Refugee (RANIR), while residents along the road between Myitkyina and Bamaw will suffer the most.
At present, the displaced are receiving help from local aid groups and those in the community, but there are doubts over how long that can continue.
"We won't be able to support [this] for the long run," La Rip said, reiteratingacall for international assistance.
"WFP [the UN World Food Programme] on Thursday [18 August] started distribution to the displaced in Kachin, providing rice rations to about 3,100 displaced people in Myitkyina and [the] neighbouring town, Waimaw," Marcus Prior, regional spokesman for WFP, said on 19 August.
"Rice supplies for an additional 3,000 displaced people around Bamaw are planned for distribution in the coming days and we are hopeful that these distributions to the displaced will be significantly expanded in the weeks ahead."
MYANMAR: Dire conditions for IDPs in Kachin as tension mounts
Fighting in Kachin State displaces thousands to makeshift camps
LAIZA, 23 August 2011 (IRIN) - A group of villagers travels alongamuddy mountain path in northern Myanmar with food, clothing and any belongings they can carry in bamboo baskets on their backs; babies are strapped to young children's chests as they try to keep up with their parents.
Posted by Admin Wednesday, August 24, 20110comments
Kachin Catholic Women, fund raising for Kachin Refugees the Victims of Civil war....
Posted by Admin Saturday, August 20, 20110comments
American mungdan Taxes Forth worth kaw shanu nga ai Myushayi niashakut shaja ai lam sumla hkrung hpe youtube kaw nna garan dat ya ga ai .
Posted by Admin Friday, August 19, 20110comments
Posted by Nwaipan at 4:38 AM
Posted by Admin Wednesday, August 17, 20110comments
by Ko Zam on Tuesday, July 12, 2011 at 11:35am
၁၉၉၉ခုနှစ်မှာ စိနပညာရှင်နှစ်ဆူက လွန်မြောက်သောစစ်ဆိုပြီး ကျမ်းတစ်အုပ်
ကိုထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ သူ.ရိုတွေလို. အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာတော်တော်ကြီးကို ဂယက်
ရိုက်ခဲ့တယ်။ သူတို.နှစ်ဦးရေးလိုက်တဲ့ထဲမှာ လွန်မြောက်ခြင်းဆိုတာကို
အပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ.ကန်.ပြီးတင်ပြတယ်။ ပထမအပိုင်းက On New Warfare
အသစ်သော စစ်ရေးစစ်ရာ လို.ပြောလိုရမလားပဲ။ဒုတိယအပိုင်းမှာတော့
A Discussion of New Methods Operationပါပဲ။တစ်ချိန်ချိန်မှာ လူမျိုး
တစ်ရာတစ်ပါးတွေနေတဲ့ နိုင်ငံကြိးနဲ. ထိပ်တိုက်တွေ.ကိုတွေ.ရမယ်ဆိုတဲ့
အနုမာနမှန်းဆချက်ကို အခြေတည်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်နည်းလမ်း
တွေ။.ကဏ္ဍတွေကို ပြောထားရေးထားတာပဲလို. နားလည်ရတယ်။ဒီစာအုပ်
ထဲက ရန်သူဆိုတာဟာ သိပ်ကိုအင်အားကြီးလွန်းတဲ့ နိုင်ငံတော်ကိုရည်ညွန်း
သောနည်းလမ်းဖြင့်သာ အားကြီးသူကို အားနည်းသူက စိုးမိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့
the strong can be defeated through merciless unconventional methods.
သိပ်ကိုကြောက်စရာကောင်းလွန်းပါတယ်။ လူကို သတ်ရင် နှလုံးသားကိုပါသတ်
ရမယ်ဆိုတဲ့ သူတို.ဆိုရိုးထက်တောင် ဆိုးရွာလွန်းပါတယ်။ဒီကျမ်းဟာ ၁၉၉၉
မှာထုတ်တာပါ။ ၉/ ၁၁ အရေးအခင်းကြီး မတိုင်မီ သုံးနှစ်အလိုဖြစ်ပါတယ်။
ရဲ. ပထမဦးဆုံးသော ဥပဒေသက မည်သို.သော ဥပဒေမှမရှိခြင်းပဲတဲ့။ဥပဒေ
The first rule of unrestricted warfare is that there are no rules,with
တယ်။ ရှိသမျှ နည်းလမ်းကို အကုန်သုံးဆိုတဲ့ နည်းလမ်းပါ။
စစ်ဆိုတဲ့ နေရာ။ အခန်းကဏ္ဍကိုဖွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကမ်းကုန်လွန်လှပြန်တယ်။
ဘဏ္ဍာရေးစစ်ပွဲ။ ပစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ နိုင်ငံ၇ဲ. ငွေကြေးရဲ.တန်ဖိုးတွေ။စတော့ဈေး
မှောက်ခိုစစ်ပွဲ။ ။ ပစ်မှတ်နိုင်ငံရဲ.ဈေးကွက်ကို လက်ဝါးကြိးအုပ်ထားနိုင်အောင်
တိုက်စစ်ဆင်တာပဲ။တရားမ၀င်တဲ့ကုန်စည်တွေကို ပစ်မှတ်နိုင်ငံရဲ. ဈေးကွက်
ယဉ်ကျေးမှုစစ်ပွဲ။ ။ ဆရာတစ်ဥိးကတော့ programmed cultureလို.တောင်ပြောဖူး
တယ်။ ပစ်မှတ်နိုင်ငံမှာ သူတို.တွေရဲ.ယဉ်ကျေးမှုအငွေ.အသက်တွေလွှမ်းမိုးအောင်
မူးယစ်စစ်ပွဲ။ ။ မူးယစ်စစ်ပွဲဆိုလို. မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုတိုက်ဖျက်တယ်မထင်နဲ.
ပစ်မှတ်နိုင်ငံရဲ.ပြည်သူလူထုတွေကို အညွန်.တုံးအောင်လုပ်တဲ့စစ်ပွဲပဲ။ တရုတ်ပြည်
မှာ ဘီန်းစစ်ပွဲ လုပ်သလိုပေါ့။
မီဒီယာစစ်ပွဲ။ ။ လေလှိုင်းကနေ စစ်ပွဲဆင်တာလို.ပြောရမယ်ထင်တယ်။ ရေဒီယိုတို.
နည်းပညာစစ်ပွဲ။ ။ နည်းပညာတွေကိုခိုးယူမယ်။ ကိုယ်ဆီက နည်းပညာတွေကိုကျ
တော့ ထိန်ဝှက်ထားမယ်။စစ်မက်ကာလမှာေ၇ာ။ စစ်မဲ့ကာလမှာရောအရေးကြီး
အရင်းအမြစ်စစ်ပွဲ။ ။ မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကုန်ကြမ်းတွေရနိုင်တဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်
တွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာ သိမ်းကျုံးဝယ်တာတို. ။ ဈေးကွက်အက်ဆက်တွေကိုမောင်ပိုင်စီး
စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးစစ်ပွဲ။.။ သူတို.တွေရဲ.အမျိုးသာအကျိုးစီးပွားဟာ ပစ်မှတ်ထား
နိုင်ငံရဲ.အကျိုးစိးပွားနဲ.အတူတူဖြစ်သယောင်လုပ်တဲ့စစ်ပွဲပဲ။ သူတိုထိခိုက်ရင် ပစ်မှတ်
ကွန်ရက်စစ်ပွဲ။ ။ ကွန်ရက်စစ်ပွဲဆိုတာက နိုင်ငံစုံသတင်းအချက်အလက်တွေကိုနိုက်ထုတ်
ဖို.နဲ. နိုင်ငံစုံသတင်းအချက်အလက်တွေကို ဖြိုဖျက်နှောင့်ယှက်ဖို.ပဲ. အဖျက်လည်းလုပ်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေစစ်ပွဲ။ ။ သူတို.လိုလားတဲ့ပေါ်လစီတစ်ခု နိုင်ငံတကာအဖွဲ.အစည်း
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စစ်ပွဲ။ ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းပေးဖို.မဟုတ်ဘူး။ ပစ်မှတ်
ထားတိုင်းပြည်ရဲ. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်။ယိုယွင်းအောင်လုပ်တာမျိုး
ကိုပြောတာ။ ဥပမာ ။။ တောမီးရှို.တာမျို.ပေါ့။ဒီထက်မကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။
စီးပွားရေးအကူအညီစစ်ပွဲ။ ။ ပစ်မှတ်တိုင်းပြည်က ကိုယ်အပေါ်ကို စီးပွားရေးအကူအညီ
ထောက်မှီလာအောင်လုပ်တာပဲ။ နောက်တစ်မျိုးက ပစ်မှတ်တိုင်းပြည်ကိုမလိုရင်မလို
သလို စီးပွားရေးအကူအညီမရအောင် ထိန်းချုပ်ထားတာမျိုးပဲ။
စစ်တိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ ဒိုင်းညောင်ဒိုင်းညောင့်လုပ်မှ စစ်တိုက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကို
ပြသနေတာပဲ။ဒိစာအုပ်ရဲ.အခန်း ရ ဖြစ်တဲ့ Ten thousand methods combinded as
one: combinations that transced boundaries ကိုဖတ်ကြည့်ရင် ပြတ်ပြတ်ထင်းထင်း
ဒီမှာ combined ဆိုတဲ့စကားပါလာလို.ထပ်ရှင်းပြပါရစေ။ ကြည်းရေလေ ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေး
ဆိုတဲ့ အဆင့်ကိုဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအဆင့်ထက်ကို လွန်မြောက်ကျော်လွန်သွားပြီ။
ဘက်ပေါင်းစုံ စစ်ဆင်နွဲခြင်းကို ဆိုလိုတာ။ အဲဒါပြင် သူ.မှာ လစ်မစ်ဆိုတာကလည်းမရှိတော့ဘူး
နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ အဆင့်ကိုလွန်မြောက်သွားတယ်။ supra-national
နယ်ပယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုလွန်မြောက်သွားတယ်။ supra -domain
နည်းနာနိဿရည်းဆိုတဲ့အဆင့်ကိုလွန်မြောက်သွားတယ်။ supra -means
အလွှာအကန်.များဆိုတဲ့အဆင့်ကို လွန်မြောက်သွားတယ်။ supra-tires
အဲသလိုကို ကမ်းကုန်အောင် လွန်မြောက်ချိုးဖောက်သွားတဲ့စစ်ရေးအတွေးအခေါ်အဆောက်အအုံ
စိတ်ဝင်စားဖို.အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ကျုပ်တော့ တွေးလေတွေးလေ ကျုပ်တို.တတွေ ခွေးဖြစ်နြေ
ပြီဆိုတာ တစ်ထစ်ချ ယူဆလိုက်တယ်။ ကျုပ်တို.တတွေခွေးဖြစ်တာကြာပကော။ နိဂုံးအနေနဲ.တော့
today's war will affect the price of gasoline in pipelines. the price of food in supermarkets,
and the prices of securities on the stock exchange . They will also disrupt the ecological
balance and push their way into everyone of our home by way of television screen.
Thant Ko Ko Maung ရှယ်မယ်ဗျာ ... ခုတစ်လောလည်း ဒီခွေးဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းပဲ စဉ်းစားမိနေတယ် ...
Copyright 2009 : KTO-USA: August 2011 Monezine Blogger Template Designed By Jinsona Design | Blogger XML Coded By CahayaBiru.com